1. Yintoni ebangela inqanaba leglucose egazini?
Izinto ezininzi zinokuba ngunobangela wenqanaba eliphezulu leswekile yegazi, kodwa into esiyityayo idlala eyona ndima inkulu kunye neyona iphambili ekuphakamiseni iswekile yegazi. Xa sisitya iicarbohydrate, umzimba wethu uguqula ezo carbohydrate zibe siswekile, kwaye oku kungadlala indima ekukhuliseni iswekile yegazi. Iiproteni, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kwixabiso eliphezulu zinokunyusa amanqanaba eswekile yegazi. Amafutha awanyusi manqanaba eswekile yegazi. Uxinzelelo olukhokelela kukonyuka kwehomoni cortisol inokuphakamisa amanqanaba eswekile yegazi.
2. Nguwuphi umahluko phakathi kohlobo 1 kunye nohlobo 2 lweswekile?
Uhlobo lwe-1 lweswekile yimeko yokuzimela komzimba ekhokelela ekubeni umzimba ungakwazi ukuvelisa i-insulin. Uhlobo lweswekile sesi-2 sisifo apho umzimba ukwazi ukuvelisa i-insulin kodwa awukwazi ukuvelisa ngokwaneleyo okanye umzimba ungaphenduli. kwi-insulin eveliswayo.
3. Ndazi njani ukuba ndinesifo seswekile?
Isifo seswekile sinokufunyanwa ngeendlela ezininzi. Oku kubandakanya i-glucose yokuzila> okanye = 126 mg / dL okanye i-7mmol / L, i-hemoglobin a1c ye-6.5% okanye ngaphezulu, okanye inyuse iswekile kuvavanyo lomlomo lweswekile yomlomo (OGTT). Ukongeza, iswekile engacwangciswanga ye-> 200 Isindululo seswekile.
Nangona kunjalo, kukho imiqondiso kunye neempawu ezibonisa ukuba isifo seswekile kwaye kufuneka sikwenze ucinge ngokufumana uvavanyo lwegazi. Oku kubandakanya ukunxanwa okugqithisileyo, ukuchama rhoqo, ukungaboni kakuhle, ukuba ndindisholo okanye ukurhawuzelela kwemida, ukuzuza ubunzima kunye nokudinwa. Ezinye iimpawu ezinokubakho zibandakanya ukungasebenzi kakuhle kwamadoda kunye nexesha elingaqhelekanga kwabasetyhini.
4. Kukangaphi kufuneka uvavanye iswekile yegazi lam?
Ukuhamba rhoqo apho kufuneka kuvavanye igazi lakho kuya kuxhomekeka kwirejimeni yonyango okuyo kunye neemeko ezizezinye. Izikhokelo ze-NICE zika-2015 zicebisa ukuba abantu abanesifo seswekile sokuvavanywa kweglucose ubuncinci amaxesha ama-4 ngemini, kubandakanya ngaphambi kwesidlo ngasinye naphambi kokulala.
5. Lifanele ukubonakala njani inqanaba leswekile eqhelekileyo?
Buza ukhathalelo lwakho lwempilo ukuba lubonelele ngantoni kuluhlu lweswekile esegazini lakho, ngelixa i-ACCUGENCE inokukunceda usete uluhlu lwenqaku lesalathiso soRange. Ugqirha wakho uya kuseta iziphumo zovavanyo lweswekile yegazi ngokusekwe kwizinto ezininzi, kubandakanya:
● Uhlobo kunye nobukrakra besifo seswekile
● Unexesha elingakanani unesifo seswekile
● Isimo sokukhulelwa
● Ubukho beengxaki zesifo seswekile
● Impilo iyonke kunye nobukho bezinye iimeko zonyango
Umbutho we-American Diabetes Association (ADA) ucebisa la manqanaba eswekile alandelayo:
Phakathi kwe-80 kunye ne-130 yeemiligram nge-desilitha (mg / dL) okanye kwi-4.4 ukuya kwi-7.2 millimoles ilitha nganye (mmol / L) ngaphambi kokutya
Ngaphantsi kwe-180 mg / dL (10.0 mmol / L) kwiiyure ezimbini emva kokutya
Kodwa i-ADA iqaphela ukuba ezi njongo zihlala zihluka ngokuxhomekeka kubudala bakho nakwimpilo yakho kwaye kufuneka zibekwe zodwa.
6. Yintoni iiKetoni?
Iiketoni ziikhemikhali ezenziwa kwisibindi sakho, zihlala njengempendulo ye-metabolic kukutya okune-ketosis. Oko kuthetha ukuba wenza ietoni xa ungenayo i-glucose egciniweyo eyaneleyo (okanye iswekile) ukuze ubenamandla. Xa umzimba wakho usiva ukuba ufuna enye indlela yeswekile, uguqula amanqatha abe ziietoni.
Amanqanaba akho e-ketone angabakho naphi na ukusuka ku-zero ukuya ku-3 okanye ngaphezulu. Apha ngezantsi kukho uluhlu ngokubanzi, kodwa hlala ukhumbula ukuba iziphumo zovavanyo zinokwahluka, kuxhomekeke kwindlela otya ngayo, inqanaba lomsebenzi, kunye nexesha olichithe kwiketosis.
7. Yintoni i-ketoacidosis yeswekile, i-DKA?
I-ketoacidosis yeswekile (okanye i-DKA) yimeko yonyango enokubangela amanqanaba aphezulu eetoni egazini. Ukuba alwamkelwa kwaye liphathwe kwangoko, oko kungakhokelela ekubeni isiqaqa okanye ukufa.
Le meko yenzeka xa iiseli zomzimba zingakwazi ukusebenzisa iswekile yamandla, kwaye umzimba uqala ukuphula amanqatha ukuze ufumane amandla endaweni yoko. Iitoni ziveliswa xa umzimba ususa amanqatha, kwaye amanqanaba aphezulu eetoni angenza igazi libe neasidi kakhulu. Kungenxa yoko le nto uvavanyo lweKetone lubaluleke kakhulu.
8. Iiketoni kunye nokutya
Xa kuziwa kwinqanaba elifanelekileyo le-ketosis yesondlo kunye neetoni emzimbeni, ukutya okufanelekileyo kwe-ketogenic kubalulekile. Kwabaninzi abantu, oko kuthetha ukutya phakathi kwe-20-50 gram yee-carbs ngosuku. Ingakanani i-macronutrient nganye (kubandakanywa ne-carbs) oyifunayo kufuneka ihluke, ngoko kufuneka usebenzise i-keto calculator okanye udibanise nomboneleli wakho wezempilo ukufumana iimfuno zakho ze-macro.
9. Yintoni iUric acid?
IUric Acid yinto eqhelekileyo yenkunkuma yomzimba. Yenzeka xa imichiza ekuthiwa yi-purines iphuka. Iipurines yinto yendalo efumaneka emzimbeni. Zikwakho nakokutya okuninzi okufana nesibindi, iqokobhe kunye notywala.
Ukuxinana okuphezulu kwe-uric acid egazini ekugqibeleni kuya kuguqula i-asidi ibe ziikristale ze-urate, ezinokuthi emva koko ziqokeleleze ngokudibeneyo kunye nakwizicubu ezithambileyo. Iidipozithi zeenaliti ezinjenge-urate crystals zinoxanduva lokudumba kunye neempawu ezibuhlungu zesifo.
Ikhithi yokuSimahla yeSwekile yeGazi, Iswekile Khangela uMatshini kweyona nkampani, IPneumotachograph Spirometer, Ukuzila ukutya kweGazi leShukela 100, 5.2 Igazi leswekile, Umatshini wovavanyo lweSwekile yegazi,